BitBucket: Beddelkeyga ugu fiican ee GitHub | Laga soo bilaabo Linux
BitBucket: Beddelkeyga ugu fiican ee GitHub
Markii aan soo saareyno codsi, ama desktop ama shabakadda, waxaa ugu wanaagsan in lagu martigaliyo koodhkeenna nidaamka xakamaynta nooca sababo kala duwan awgood:
Waxaan dib ugu laaban karnaa qodob hore hadii aan wax ka qaldan nahay.
Waxaan si fiican u xakameyn karnaa noocyada koodhkeenna ama alaabteena.
Waxaan ku abuuri karnaa "laamo" mashruuceena isbedello cusub iyadoo aanaan saameyn ku yeelanayn fikirka asalka ah.
Kuwani waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka noocan ah ee nidaamka noogu deeqo. Ka mid ah kuwa ugu caansan ee aan haysano tag, Meerkuri iyo awoowe xaafadda, ku dhowaad waa la ilaaway kharribaa.
Sida macquul ahaan, waxaan heli karnaa kuweena Nidaamka Xakamaynta Nooca adeegeena, ama daruuraha, ahaanshaha GitHub suurto gal ah ugu fiican ee la yaqaan, laakiin dabcan ma aha kan kaliya.
Waxaa jira qaabab kale oo aad u wanaagsan sida Damac badan, GitLab oo aan ugu jeclahay, BitBucket taas oo leh xulashooyin aysan kuwa ka soo horjeedaa haysan, ama si fudud, waa inaan ku bixino iyaga.
BitBuckets waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan ku galno adeegsiga FurID, koontadayada Facebook, ee Google, ee Twitter ama GitHubmarkaa ha isku dayin samee akoon emayl Hotmail-ka si aad ugu isticmaasho, maxaa yeelay ma shaqeyn doono illaa aad iska diiwaangeliso sidan oo kale goobta 😛
Faa'iido kale oo noo ogolaaneysa BitBuckets waa in dhowr la yeesho Meelaha gaarka loo leeyahay, Abuur koox-kooxeedyo ama suurtagalnimada in isbeddeladayada lagu sameeyo HTTPS, iyada oo aan loo baahneyn in la habeeyo dekedo dhif ah ama xuduudaha horumarsan.
Tani waa raaxo aniga ahaan, maxaa yeelay waddankayga qaar badan oo ISP ah ayaa xannibma dekedo gaar ah oo loo isticmaalo GIT, laakiin leh BitBucket tani dhib maahan. Xaqiiqdii, markii aan helno koontadayada oo aan hawlgalno, waxaan heli doonnaa wax sidan oo kale ah:
Markii ugu horreysay ee aan soo galnay BitBucket Waxay na siin doontaa tilmaamaha si aan u hagaajino koontadayada oo aan u abuurno keydkeena ugu horreeya, hab fudud. Waxaan dooran karnaa nooca koodhka aan martigelin doonno, daqiiqado gudahoodna waxaan ku bilaabi karnaa shaqeyn.
Caadi ahaan markaad isticmaalayso Git server-ka daruuriga ah, waa inaad qaabeeysaa furayaasha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, inaad xiriir kalsooni ka dhex abuurtaa PC iyo Server, iwm ... Sababta qaar awgeed maahan inaan mid uun ka sameeyo that
Taasi waa sababta BitBucket Aniga ayaa ah tan ugu fiican ee aan ku heli karo GitHub, inkasta oo dabcan, qof kastaa wuxuu leeyahay dhadhankiisa iyo sababaha uu u doorto kan ugu fiican Nidaamka Xakamaynta Nooca wax kastoo aad jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » BitBucket: Beddelkeyga ugu fiican ee GitHub
Waxaan ku qasbanaan lahaa inaan koonto ka sameysto qaar ka mid ah server-yadaas, waxaan hayaa lambarro badan oo ku qoran C (Gtk), Vala iyo PyGTK, oo aanan weligey ku xirin shabakadda si toos ahna aan ula wadaago.
Waa inaan aqriyaa casharro ku saabsan sida koonto looga sameeyo aaladdan.
. Inta badan barnaamijyada bilaashka ah ee softiweerku waxay adeegsadaan Github, sidaana waa kiiska bulshada Linux Mint ama mashruuca MATE iyo Gnome.
Waxaan sidoo kale isku dayay BitBucket runtuna waxay tahay inay aad u wanaagsan tahay. Waxay leedahay muuqaal uusan GitHub lahayn taas oo ah fargeetooyin isku mid ah. Si kastaba ha noqotee, GitHub sidoo kale wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku isticmaasho Git hoosta HTTPS, wuxuu si aad ah ugu dhexjiraa qalabka saddexaad (Open Build Service, Travis-CI, iwm) wuxuuna leeyahay marti gelin bilaash ah oo bogag ma guurto ah (runti waad martigalin kartaa barnaamijyada Firefox OS).
Uma jeedo inaan ordo:
Laakiin si loo fuliyo Riixitaanka iyo Ballanqaadka HTTPS .. Waxaan ka hadlaynaa isla wax, sax?
Run ahaantii ma jiro sida Github oo kale.
Hubaal, gaar ahaan marka aad lacag bixinayso si aad u isticmaasho 😉
Elav Runtii ma inaad lacag bixisaa si aad u isticmaasho?
Si aad u hesho keydyo gaar ah iyo hawlo kale HAA, waa inaad BIXISAA.
Sidee foolxumo u tahay in lala shaqeeyo bakhaarrada gaarka loo leeyahay, maxaa yeelay waa inay qariyaan wax xun.
Dhammaan softiweerku waa inay ahaadaan kuwo bilaash ah oo dadweynaha ah.
Haddii Elav ay taageerto keydadka gaarka loo leeyahay, taasi waxay ka dhigan tahay inay taageerto software-ka lahaanshaha.
Lucas, goorma ayuu Elav sheegay inay taageersan yihiin keydadka gaarka loo leeyahay ama softiweeriyada lahaanshaha leh?
Elav kaliya wuxuu ku xusay boostada suurtagalnimada (bixinta) in lagu abuuro keyd gaar ah BitBucket, ka dib faallo uu ku caddeeyey / ku celiyey isticmaale, wax intaas dhaafsiisan.
Fadlan ereyada ha gelin qof kale afkiisa. _¬
Anigu gabi ahaanba kuma raacsani in dhammaan softiweerku noqdo mid bilaash ah oo furan. Shar iyo shar iyo shay midna midna maaha, waa (shaqsi ahaan) sababo aad u kala duwan.
Qiyaas inaad tahay soo saare barnaamij softiweer ah oo madaxbanaan isla markaana aad hayso codsi caadi ah laakiin aad ku dartay wax qabadyo asal ah. Hadda, waxaad taageertaa ilo furan oo aad go'aansataa inaad ka sii deyso koodhka shaqooyinka guud laakiin hawlaha aan caadiga ahayn waxaad go'aansatay inaad iyaga ka dhigto kuwo gaar loo leeyahay. Maxaad sidaa u sameysay?
Maaddaama shaqooyinka aan caadiga ahayn ay yihiin waxa ka dhigaya dalabkaaga mid soo jiidasho leh, waxay noqon doonaan kuwa ku siiya dakhli, gabdhaha kale, macaamiil badan, iwm. Koodhkaas gaarka ahi wuxuu noqon doonaa midka kaa ilaaliya oo kaa dhigaya inaad ka duwanaato kuwa kale ee horumarineed, haddii aad sii deyso lambarkaas, qof kastaa wuu sameyn karaa astaamahaas cajiibka ah ee dalabkaaga ka dhigay mid gaar ah, waxaad waayi doontaa noloshaada, dakhligaaga.
Hadda ma fahantay sababta aan kuu diiddanayn? Dhammaan barnaamijyada waa inaysan bilaash noqon. Haddii dakhligaagu ka yimaado ilo kale, ka dib wax walba sii, si aad u sii deyso dhammaan lambarka aad haysato, laakiin haddii aad ku nooshahay ka soo saarista barnaamijyada ma awoodi kartid raaxadaas.
Elav wuxuu tirtirayaa gelitaankii aan ka sameeyay "" tufaax tufaaxeedkii Cinnamon "".
maxaa yeelay hadaanay ahayn kuwa isticmaala linux way ku khaldami karaan dib u eegista la sameeyay.
Dhib malahan, nasiib ayaan leenahay.
@marianogaudix Waxaan warqad ugu qoraa 😉
@Lucas: Waxaa jira waxyaabo aan loo baahnayn inay ahaadaan qof walba gaaristiisa iyo aqoontiisa, shaqsiyadiisa ama mashaariicdiisa shaqo. Maxay tahay dhibaatada ka jirta adeegsiga Keydka Gaarka loo leeyahay?
Github waa inaad bixisaa haddii aad rabto inaad lahaato meelo gaar loo leeyahay, taas oo ah, si guud uma muuqdaan. Inta bitbucket-ka waxaad yeelan kartaa bakhaarro gaar loo leeyahay adigoon wax lacag ah bixin, laakiin illaa 5 isticmaale oo keliya ayaa ka shaqeyn kara bakhaarradaas, haddii ay intaas ka sii badan tahay inaad bixiso. Ka soo horjeedka github oo aan lahayn xaddidan marka loo eego tirada dadka isticmaala.
Mid waliba wuxuu leeyahay faa iidooyinkeeda, waxay kuxirantahay dhadhanka ama baahiyaha aad qabto.
@kaltwulx aniga waxay ila tahay inaad naftaada aad u qiimeynayso ... sida aduunku u yahay mid caalami ah, waxay u egtahay in astaamaha uu qof kale horay u sameeyay. Ka sokow, haddii aad sameyso wax aad u cusub, waxaad u badan tahay inaad keento dareen markaa waxay kuugu yeerayaan dhinacyo badan oo kuu fidinaya $ $ inaad waxyaabo kale qabato.
Wuxuu u maleynayaa waxa dhici lahaa haddii Newton uu dhammaan aragtidiisa caddeeyo.
Ku jawaab wakko
Bitbucket waxay noqon kartaa heerka Github laakiin Atlassian (shirkadda) waa uun shey kale oo ma ahan xiddiggeeda, hase yeeshee Github waxaa sameeya "Github Inc." u fiirsado heerka ballanqaadka?
Shakhsi ahaan waan ku raaxeystaa Mercurial waxbadan iyo waxkasta oo gaar ah waxaan u isticmaalaa Bitbucket laakiin si aan ula shaqeeyo shaki la'aan Github waa meesha saxda ah.
Hubi inta waxyaalood ee ay Atlassian leedahay marka laga reebo Bitbucket: https://www.atlassian.com/software
Waxaan sidoo kale isticmaalaa Bitbucket. Anigana aniga faa iidadeeda ugu weyn ee aan kahelo GitHub ayaa ah inaan abuuri karo GIT ama keydka Mercurial, taas oo kuxiran waxa aniga igufiican
Elav, maxaad ka leedahay inaadan abuurin xiriir aamin ah oo ka dhexeeya PC iyo Server.
Ma waxaa lagaa rabaa inaad gasho xarunta oo aadan abuurin furaha RSA ama wax la mid ah?
Ku jawaab Faustino
Waqtigan xaadirka ah ma xasuusto inaan sameeyo wax O_O ah
Sidoo kale waa inaadan ogeyn haddii aad dareentay SourceTree ee Windows iyo Mac oo ay abuureen shirkadda Atlassian oo ah shirkad la mid ah Bitbucket isla markaana aad ugu eg macmiilka git. Nooca Linux-ka ee ay yiraahdeen wuu soo baxayaa laakiin kuma jirin qorshayaashooda degdegga ah.
Hadana haddii aad leedahay xisaab jaamacadeed, labada GitHub iyo Bitbucket waxay ku siinayaan hadiyado yar.
Bitbucket way fiican tahay, waxaan u adeegsadaa Github meelaha dadweynaha lagu keydiyo iyo Bitbucket kuwa gaarka loo leeyahay, badankooduna waxay u shaqeeyaan dhinacyada saddexaad. Gitorious iyo Gitlab ma aysan aqoonin. Waan tijaabinayaa.
Waxaan sidoo kale isticmaalaa labada nidaam oo markaa waxaan ka faa'iideysanayaa faa'iidooyinka mid waliba leeyahay
Jawaab Adrian Martinez
Waan jeclahay inay kafiican tahay github, waxay kaloo ii ogolaaneysaa inaan abuuro meel gaar loo leeyahay, ma hayno mashaariic bilaash ah markasta.
Waad ku mahadsan tahay tilmaanta, waan eegi doonaa!
Waan ku faraxsanahay inaad jeclaatay Bitbuckets… waxay leedahay dhibco sare.
Markaan daqiiqad yeesho waxaan hoos u dhigayaa dulucda (in kasta oo markii iigu dambeysay aan dhib ku qabay isticmaalkeeda).
Soo jeedinta xiisaha leh, maadaama uguyaraan ay leedahay faa iidada ay kuheyn karto mashaariicdeena shaqsiyadeed keydka, iyo maadaama aad wax ka dhiibatay xayiraadda ISP-yada, waxay igu qancisay inaan u isticmaalo in ka badan GitHub lafteeda.
Jidka, OwnCloud sidoo kale wuxuu ku dari karaa isla qaababka GitHub?
Runtu waxay tahay in Bitbucket uu yahay bedel wanaagsan oo waxa aan ugu jeclahay bitbucket-ka ayaa ah inaad heli karto keyd gaar loo leeyahay, kaas oo Github ay tahay inaad ku bixiso.
Aad ayaan ugu mahadcelinayaa macluumaadka. Aad baan ugu farxay markaan arkay inay wali jiraan goobo lacag la’aan ah oo gaar loo leeyahay .. Salaan kadib sii wad.
Ma dhahayo BitBucket ma fiicna, hada waan isticmaalayaa waana jeclahay wax badan, laakiin waxaan doorbidaa inaan bixiyo repo gaar loo leeyahay intaan bixin lahaa wax ka badan 4 isticmaale, taas oo github igu siineyso si aan xad laheyn
Gali qoraal gaar ah bilowga ama dhammaadka feyl leh sed, hadal caadi ah
Ma ogtahay in hada Facebook sidoo kale aqrin karo SMS / MMS-kaaga.